Hanomboka: Fialan-tsasatra bitika kely (mahazatra amin'ny endriny rehetra)
1912 Restaurant - A la carte menu, na, Menu feu - 110 €
1912 Restaurant - 5th Element (-14 taona) - 25 €
1912 Restaurant: Our menu menus
1912 Restaurant - Fankasitrahana
Amin'ny 1912, tsy hahita ny lovan'ny Signatures ianao, tsy maintsy ...
Ny tsindrin-tsakafo rehetra
Fialan-tsasatra bitika kely (mahazatra amin'ny endriny rehetra)
Camembert savory sigara
Mackerel savory sigara
Ny kôlômbia nohanina
Fonon'ny afo: sakafo voalohany
Kakazo-Rave / Sesame / Beau Masina avy any Chiloe
Lettuce Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho beaka (19.00 €)
Ny legioma organika / Ny tongolo lay / Phu Quoc pepper mena (23.00 €)
Crab / Cherbourg salmon / Likouala dipoavatra (35.00 €)
Tendrombohitra maitso / Tansy / Ishigaki lava voatoto. (28.00 €)
Fefy afo: Ny lovia
Mamy mamy / Morels / White Sarawak pepper (46.00 €)
Fisotroana zavamaniry / miaraka amin'ny hareza mena / Penja fotsy fotsy (48.00 €)
Fire Menu: Ny trondro matsiro
Ny trondro matsiro trolley (15.00 €)
Fire menu: Ny tsindrin-tsakay
Lemon / Mint banana / Batak beaka (18.00 €)
Menamena: sakafo voalohany
Menamena: Ny lovia
Sakafo rano: Desserts
Lemon / Mint banana / Batak beaka
Ny sakafo eto an-tany: Ny lovia
Fisotroana zavamaniry / miaraka amin'ny hareza mena / Penja fotsy fotsy
Tolotra momba ny tany: Desserts
Air menu: sakafo voalohany
Lettuce Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho beaka
Ny legioma organika / Ny tongolo lay / Phu Quoc pepper mena
Air menu: Voanjo
Tendrombohitra maitso / Tansy / Ishigaki lava voatoto.
Air menu: Desserts
5th Elémént - sakafo voalohany
Ny karôta velvety misy ronono voanio.
Ny takelaka misy legioma organika
Toko 5 - Ny lovia
Sakafo Salmon avy amin'i Isigny miaraka amin'ny ahitra
Karazam-boninkazo natoraly sy akoho homemade
Singa 5 - Desserts
Mofomamy mofomamy kely amin'ny fahazazako
Ice cream sy sorbets
1912 Restaurant, fanahin'ny menakay afo
Ity sakafo fanasana ity dia ny labozia, ny catalyst. Novalian-tsarimihetsika, mifantoka amin'ny antony manosika antsika. Ny isa 14 dia manamarika ity ampahan-tsokajy ity miaraka amin'ny ampahany mihena dia hahitanao ny fahatsapako rehetra. (110.00 €)
1912 Restaurant, ny fanahin'ny sakafo misy anay
: Tahaka ny rano mamerina ny tontolo iainany, ity Menu ity no loharanon-tsindrimandry ", loharanom-pihetseham-po sy famoronana ... Onjam-pifaliana iray. Vokatry ny sakafo 6 miorina amin'ny hazan-dranomasina, dia tsy mahagaga ny fahatsarany. (80.00 €)
1912 Restaurant, ny fanahin'ny sakafo eto an-tany
Tahaka ny Tany, ity sakafo ity dia toy ny fakan'ny sakafo, ny iray izay miantoka ny filaminana, ny fiantohana ny sakafo tsara manankarena amin'ny traikefa, ny fahalalantsika. Vokatry ny lovia 6 miaraka amin'ny fanamarihana eto an-tany izany dia manome fahafinaretana an-tsitrapo. (80.00 €)
1912 Restaurant, fanahin'ny menan'ny rivotra
Io menaka fanenoman-tsakafo io, toy ny rivotra iaiantsika, dia ny atidohantsika ara-tsaina sy ara-javakanto, dia rivotry ny fahalalana, onjam-peo vaovao hitadiavana ny fihetseham-po lalina ... Vokatry ny lovia 6, tsy manala ny vokatra avy amin'ny biby, mampientanentana ... (70.00 €)
1912 Restaurant, fanahy ny mombamomba ny singa 5
Ny fampifangaroana ireo famantarana rehetra ireo, dia natao ho an'ny tanora indrindra izany. Ny fampisehoana ny tsiro sy ny fandrosoan'ny tsiro vaovao, ny sakafo ho an'ny ankizy dia hahagaga sy hampihomehy ny tsiro tsiro.rers ny tsiron-tsakafo vaovao, sakafo ho an'ny tsy ampoizina sy ny fialan-tsasatra. (25.00 €)
Fankasitrahana: Ho an'ireo mpiara miasa aminay, ...
Blue lobster avy amin'ny tanky, legioma lohataona ary lasopy mofomamy (54.00 €)
Ny ahy Meunière irery sy ny karazam-pototra risotto (39.00 €)
Peatad Whisky nohosorana taolan-tehezana, nanompo olona roa (84.00 €)
Queen of beaches: A la carte na amin'ny menu 47 €
Queen of beaches: A la carte ou menu ... (47.00 €)
Mpanjakavavin'ny tora-pasika: sakafo voalohany
Mofo mofomamy miaraka amina legioma, fanehoana aloe vera ary simban'ny lemongrass (17.00 €)
Foie gras terrine miaraka amin'ny apple compote (17.00 €)
Japoney mitambolimbolina (17.00 €)
Tendrombohitra aspragus miaraka amin'ny arugula (17.00 €)
Sakafo voalohany amin'ny andro (17.00 €)
Queen of beaches: Main courses
Kitapo maingoka an-tanety, ary legioma antsoina hoe Teppanyaki (24.00 €)
Back of cod konfit, artichokes and mandarin (24.00 €)
Tendriky akoho tantely karakarao any Normandia ary tapa-tavoahangy lay Tagliatelle (24.00 €)
Mamon-dranomamy, salady salady, ary mofomamy miray amin'ny homamiadana. (24.00 €)
Kitapo bitry misy ahitra sy karoty (24.00 €)
Ny aviavy (24.00 €)
Mpanjakavavin'ny tora-pasika: tsindrin-tsakafo Sebastien Gamot
Ny mofomamy trondro
Tavoah (16.00 €)
Sakafo mahavokatra voankazo vaovao (16.00 €)
Safidy sorbet sy gilasy (16.00 €)
Dessert du jour (16.00 €)
Fahafinaretana eo amin'ny hazakazaka: Ny fianarana fototra
Kitapo sandwich vita amin'ny baolina - salady, klasika, na vegetarian (17.00 €)
Sakafo mamy sy sandwich maitso, miaraka amin'ny atody fakan-tsigara na osy (17.00 €)
Ny Bacon sy ny burger cheddar dia nanompo niaraka tamin'ny frites et salads (25.00 €)
Trondro fanangom-kitom-boasary vita amin'ny trano vita amin'ny trano vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo (20.00 €)
Sakafo nentim-paharazana avy amin'ny «Maison Saiter» (19.00 €)
Fahafinaretana eo amin'ny hazakazaka: Saha Salades M / L
Salama Caesar - 17 € / 21 €
La Trouvillaise: Shellfish sy salady trondro voankazo - 19 € / 21 €
Vegan: legioma sy voankazo - 18 € / 20 €
La Normande: Camembert, Andouille de Vire ary apple - 20 € / 22 €
Fialam-boly eny an-dalana - Iodine: 6/9/12 ny jody
Oysters avy amin'ny Saint-Vaast-la-Hougue N ° 2 • 23 € / 35 € / 45 €
Oyster avy any Côte de Nacre N ° 3 • 17 € / 26 € / 33 €
Eto amin'ity taona 1912 ity dia tsy hahita ny lovan'ny Signatures ianao, manavao ny fitsaboana ahy isaky ny vanim-potoana. Nandritra ny taona maro dia nandeha tany amin'ny faritra maromaro aho, firenena, firenena, kolotsaina izay tsy mitovy ny fomba fitantanana ny kôlinina raha tsy mitovy ny vokatra. Ny taolam-paty ao Toyoura any Japon, ohatra, dia tsy manana ny tsirony na ny endriny mitovy amin'ny an'i Trouville voavoly any amin'ny alan'i Seine. Eto amin'ny 1912, tsy hahita ny kobam-bolo Kobe na Gamberoni avy any Genoa ianao, fa i Norman sy ny lahimatoan'i Norman avy eto. "Ny kilometatra, izaho no manao azy, fa tsy ny vokatra" Ny vokatra vitsivitsy izay tsy misy fitoviana ao Normandy dia nanokatra ny varavaran'ilay lakozia. Ny diako nataon-tsakafo dia nahatonga ahy hahita ny lafiny hafa amin'ny sakafo sy ny voankazo sy ny tsiramoka .... Manomboka amin'ny taona maro dia mihamitombo ny fanangonako. Ankehitriny dia karazana aromatika maherin'ny 80 no manamboatra ny trano fonenako ary efa 30 ny karazam-borona tena izy sy sandoka miaraka amin'ny vokatra isan'andro ... Koa maninona no dipoavatra? Izany dia ny vokatra izay manohina ahy indrindra. Hitako izany amin'ny fanomanana sakafo amin'ny ririnina amin'ny ririnina. Amin'izany fotoana izany dia tsy misy ny zavamaniry. Noho izany ho an'ny chef iray izay manararaotra ny tsirony dia tsy maintsy nahita vokatra hafa aho. Izany no nahitako ny herim-po marobe nateraky ny dipoavatra. Mivoatra izany araka ny tany sy ny fahamatorany. Tahaka ny fizaran-taona efatra, izy dia avy amin'ny maitso ho an'ny lohataona, mena amin'ny fahavaratra, volomboasary amin'ny fararano mba hahavita ny mainty na fotsy indraindray toy ny ririnina. Toy izany ny tantaran'ny natiora sy ny olombelona toy izany no mahatonga ny asako ho tena tso-po. J. THYRIOT
(Allergen: Atody, Ronono, Sesame voa)
(Allergen: Glotena, Voanjo, Ronono, Voa, Sulfite)
(Allergen: Glotena, Atody, Voanjo, Voa, Sulfite)
(Allergen: Glotena, Atody, Sulfite)
Mba hanombohana, ny famokarana ravina misy nofo ...
Ny tsoka toy ny carpaccio miaraka amin'ny Chioggia siramamy beetroot.
(Allergen: Glotena, Ronono, Sulfite)
Ny legioma lohataona no misy tongolo lay
(Allergen: Atody, Ronono, Seleria)
Nopotehina tamim-boninahitra sy nendasina tamin'ny tanimboly, tora-tavoahangy seleria sy ranomandry.
(Allergen: Atody, Seleria, Sulfite, Molluscs)
Crab / Cherbourg salmon / Likouala dipoavatra
Crabmeat, paoma sy karana no nanompo tao amin'ny salomon-boankazo voajanahary
(Allergen: Glotena, Hazandrano, Atody, Hazandrano, Soja, Ronono)
Fitarazarana lehibe sy mamon-tena miaraka amin'ny tansy.
Voankazo voarara vita amin'ny vilona, rakotra voankazo, voankazo voarara.
(Allergen: Atody, Hazandrano, Ronono)
Mamy mamy / Morels / White Sarawak pepper
Biby mamy sy moraly mareva-doko miaraka amin'ny dibera, tsaramaso lehibe sy rambo.
Rack, tratra ary ny aty avy amin'ny Mont Saint-Michel, miaraka amin'ny gilasy mozika ary voankazo artichoke.
(Allergen: Atody, Ronono, Molluscs)
Ny trondro matsiro trolley
Mitefika, miempo, mihandrona, "pistachio" amin'ny endrika samihafa.
(Allergen: Glotena, Atody, Voanjo, Ronono, Voa)
Raha toa ny ranom-boankazo, dia manangom-bokatra tsara tarehy amin'ny vatosokay.
Crabmeat, ary apipaika amin'ny voankazo voajanahary voaaro, fanamarihana ny koriany May
Ity sakafo fanasana ity dia ny labozia, ny catalyst. Novalian-tsarimihetsika, mifantoka amin'ny antony manosika antsika. Ny isa 14 dia manamarika ity ampahan-tsokajy ity miaraka amin'ny ampahany mihena dia hahitanao ny fahatsapako rehetra.
: Tahaka ny rano mamerina ny tontolo iainany, ity Menu ity no loharanon-tsindrimandry ", loharanom-pihetseham-po sy famoronana ... Onjam-pifaliana iray. Vokatry ny sakafo 6 miorina amin'ny hazan-dranomasina, dia tsy mahagaga ny fahatsarany.
Tahaka ny Tany, ity sakafo ity dia toy ny fakan'ny sakafo, ny iray izay miantoka ny filaminana, ny fiantohana ny sakafo tsara manankarena amin'ny traikefa, ny fahalalantsika. Vokatry ny lovia 6 miaraka amin'ny fanamarihana eto an-tany izany dia manome fahafinaretana an-tsitrapo.
Io menaka fanenoman-tsakafo io, toy ny rivotra iaiantsika, dia ny atidohantsika ara-tsaina sy ara-javakanto, dia rivotry ny fahalalana, onjam-peo vaovao hitadiavana ny fihetseham-po lalina ... Vokatry ny lovia 6, tsy manala ny vokatra avy amin'ny biby, mampientanentana ...
Ny fampifangaroana ireo famantarana rehetra ireo, dia natao ho an'ny tanora indrindra izany. Ny fampisehoana ny tsiro sy ny fandrosoan'ny tsiro vaovao, ny sakafo ho an'ny ankizy dia hahagaga sy hampihomehy ny tsiro tsiro.rers ny tsiron-tsakafo vaovao, sakafo ho an'ny tsy ampoizina sy ny fialan-tsasatra.
Ho an'ny mpiara-miasa amintsika Maniry ny hisaotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny departemantan'ny sakafo sy zava-pisotro misy alika Cures, izay nitondra ny Belle Epoque niverina tany amin'ny Lapan'ny 1912. Ny mpiara-miombonantsika Mba hahazoana antoka fa tena zava-dehibe ny sakafo, dia vita Ny vokatra azo avy amin'ny mpamatsy miavaka. SOCODN: Fikarakarana vy Ferme du Hardoin: karazana gazoala avy any Mont Saint Michel Mr Delaunay: pigeons avy any Normandie Normandie Ferme de la Houssaye, Epaignes: foie gras L'Instant Fromage, Trouville-sur-Mer: chef Honfleur Marée: fishmonger Quesney Marée: fishmonger Gros Loulou: Trouville-sur-Mer Sailing boat Les Vergers Saint Eustache: greengrocers Pronatura: Organic greengrocers La Famille Patin: organic eggs Le Moulin du Gué Pierreux: organic Normandy safra Michel Cluizel: chocolate Perle de Gascogne: oils Baume des Anges: plant extracts Zava-tsarobidy tsara: Toeram-pisotroana fisafidianana: zava-manitra Terre Exotique: specialist peppercorn
Blue lobster avy amin'ny tanky, legioma lohataona ary lasopy mofomamy
Ny ahy Meunière irery sy ny karazam-pototra risotto
Peatad Whisky nohosorana taolan-tehezana, nanompo olona roa
Sakafom-boankazo, voankazo misy menaka miso mena
Queen of beaches: A la carte ou menu ...
Manompo amin'ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva / Ataovy ao amin'ny lisitry ny lovia voalohany, loha-hevitra sy tsindrin-tsakafo ny menuo
Mofo mofomamy miaraka amina legioma, fanehoana aloe vera ary simban'ny lemongrass
Foie gras terrine miaraka amin'ny apple compote
Tendrombohitra aspragus miaraka amin'ny arugula
Sakafo voalohany amin'ny andro
Kitapo maingoka an-tanety, ary legioma antsoina hoe Teppanyaki
Back of cod konfit, artichokes and mandarin
Tendriky akoho tantely karakarao any Normandia ary tapa-tavoahangy lay Tagliatelle
Mamon-dranomamy, salady salady, ary mofomamy miray amin'ny homamiadana.
Kitapo bitry misy ahitra sy karoty
Sakafo mahavokatra voankazo vaovao
Safidy sorbet sy gilasy
Kitapo sandwich vita amin'ny baolina - salady, klasika, na vegetarian
(Allergen: Glotena, Atody, Voantsinapy)
Sakafo mamy sy sandwich maitso, miaraka amin'ny atody fakan-tsigara na osy
Ny Bacon sy ny burger cheddar dia nanompo niaraka tamin'ny frites et salads
Trondro fanangom-kitom-boasary vita amin'ny trano vita amin'ny trano vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo
Sakafo nentim-paharazana avy amin'ny «Maison Saiter»